Fanaovana fanantajahantena : Misoroka ny aretina homamiadana -
AccueilSongandinaFanaovana fanantajahantena : Misoroka ny aretina homamiadana
Fanaovana fanantajahantena : Misoroka ny aretina homamiadana
09/02/2018 admintriatra Songandina 0
Anisan’ny aretina faharoa mahafaty betsaka indrindra eran’izao tontolo izao ny homamiadana. Fantatra fa 8,2 tapitrisa isan-taona ny olona matin’ny homamiadana manerana izao tontolo izao ary ahiana hitombo 19,3 tapitrisa izany mandra-pahatonga ny taona 2025 raha tsy misy ny fepetra raisin’ny firenena tsirairay hisorohana izany. Manoloana izay indrindra, notanterahana omaly, teny amin’ny hopitaly HJRA ny fanamarihana ny andro erantany hiadiana amin’ny homamiadana, notarihan’ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, Profesora Andriamanarivo Mamy Lalatiana, ary notronon’ny mpiara-miombon’antoka tarihin’ny OMS. Loha-hevitra nanamarihana izany ny hoe “Vitako, Vitantsika ny ady amin’ny homamiadana”. Nanombohana ny fotoana, ny hazakazaka madinika, izay niainga teo amin’ny tranombokim-pirenena Anosy hatreny amin’ny hopitaly HJRA, izay antoka iray hisorohana ny aretina.
Nambaran’ny minisitra fa anisan’ny fitsaboana ny homamiadana ny fanaovana fanantajahantena izay nampiakatra ny tahan’ny fahavelomana ny olona ho 40 isan-jato. “Amin’ny alalan’ny fomba fanovana fiainana vaovao, izany hoe tsy fifohana sigara, tsy fisotroana toaka, tsy fihinanana hena be loatra fa manova fomba fisakafoanana, toy ny fihinanana legioma sy voakanzo dia anisan’ny fisorohana ny homamiadana. Fa ilay vitako vitanao koa dia amin’ny alalan’ny fitsaboana mihitsy ary anisan’izany ny fanaovana fanantajahantena izay misoroka ny aretina homamiadana. Nampitombo 40 isan-jato ny tahan’ny fahavelomana ny fanaovana fanantajahantena”, hoy ny minisitra Pr Andriamanarivo. Voalaza nandritra ny fanamarihana omaly, ihany koa, fa ho vita afaka volana vitsy ny “radiothérapie” sy ny “cobalthérapie” izay isan’ny fitsaboana ny homamiadana eto Madagasikara, ary tafiditra ao anatin’ny pôlitika ny Fitondram-panjakana amin’ny ady homamiadana. Mahakasika ny sampan-draharaha mitsabo ny homamiadana ny zazakely dia efa tena vaovao tanteraka amin’izao fotoana izao.
Hery Rajaonarimampianina – Addis-Abeba : Resy lahatra amin’ ny asa vita ireo filoha afrikanina
Nahazoana tombony ary nahomby ny vokatry ny fivoriambe andiany faha-30, izay natrehan’ ireo filoham-pirenena aty Afrika hoy ny filoha malagasy, Hery Rajaonarimampianina, nandritra izay roa andro tatsy Addis-Abeba izay. Izay no navaliny manoloana ireo fanontaniana ...Tohiny
Maître Avoko Rakotoarijaona : “ Tsy maintsy harovana ny safidim-bahoaka”